Kheyraadka Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
2021 Gargaarka Gargaarka
Qorshaha MA 1 (HMO)
Qorshaha MA 2 (HMO)
Qorshaha MA 3 (HMO)
Qorshaha MA 4 (HMO)
MA Qorshe RX (HMO)
2020 Gargaarka Gargaarka
Qorshaha MA 006
Qorshaha Farmasiga MA 008
Qorshaha Farmasiga MA 009
MA Qorshe Dheeraad ah 010
MA Qorshaha Baahiyaha Gaarka ah 014
Qorshaha Qiimaha MA 016
Booqo 2021 Tier One Formulary
Booqo 2021 Tier Five Formulary
Ka Reebitaanka Qaaciddada / Medicare Qaybta D Foomka Codsiga Go'aaminta Caymiska
Xeerarka Biilasha Farmashiyaha
Sheegashooyinka Biilasha iyo Go'aaminta Caymiska
CHPW waxay xubin ka tahay 100% khidmadaha la soo dallaco ee ka hortagga ah iyo illaa iyo inta ay le'eg tahay macaashka loogu talagalay adeegyada dhameystiran. Bixiyeyaasha waxaa loo celin karaa lacag bixinta adeegyada la qabtay iyaga oo soo gudbinaya foomka hoos ku xusan ee ADA.
Form Foomka Sheegashada Ilkaha ee ADA
Fadlan ku soo dir foomam dhammaystiran boostada:
PO Box 269002
Plano, TX, 75026
Fadlan ogow, CHPW waxay u shaqeysaa sheegashooyinka ilkaha ee xubnaha Medicare kaliya. Sheegashooyinka xubnaha Medicaid waa in loo diraa Bixiyaha Koowaad.
Kaararka Caawinta Luqadda
Xubnaha CHPW waxay xaq u leeyihiin adeegyada marin u helka luqadda markay tagayaan ballanta daryeelka caafimaadka waxaana laga yaabaa inay u soo bandhigaan kaarkooda Kaaliyaha Caawinaadda Luqadda si ay u codsadaan baahiyaha tarjumaadda Kaadhadhkan caawimaadda luuqadda ah ayaa loo heli karaa xubnaha CHPW si ay u soo dejistaan, u daabacaan, ugana qaataan boorsadooda. Haddii aad su'aalo qabtid, wac Adeegga Macaamiisha si aad u hesho caawimaad. Wakiiladeena waxaa laga heli karaa barta 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711) toddobo maalmood usbuucii, laga bilaabo 8:00 am ilaa 8:00 pm
Soo Degso Kaararka Caawinta Luqadda
Shabakada Caafimaadka Bulshada ee Washington iyo Community Health Plan ee Washington waxay isticmaalaan tilmaamaha cudurada raaga (oo ay kujiraan xaaladaha caafimaadka iyo caafimaadka habdhaqanka) iyo adeegyada kahortaga, sida hoos ku taxan. Tixraac ayaa loo sameeyaa caddaynta ku habboon ee la tixraacayo, tilmaamaha asxaabtooda dib loo eegay ee ka socda hay'adaha Qaranka ee la aqoonsan yahay. Tilmaamaha waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan hagista bixiyeyaasha daryeelkooda xubnaheenna oo ay ku jiraan CHNW Cascade Select, CHPW Medicare, CHPW Apple Health-Isku-dhafan Maareynta Maareynta, iyo Adeegyada Caafimaadka Hab-dhaqanka ee CHPW Kaliya xubnaha. Tilmaamuhu waxay sidoo kale hubinayaan in shuruudaha loo isticmaalo go'aammada maaraynta isticmaalka ay hadda yihiin.
Ayaa dib u eegista sameeya?
Go'aamiyeyaasha Maareynta Ka-faa'iideystayaasha ayaa go'aamiya ama diida iyada oo ku saleysan haddii daryeelka iyo adeegga ay habboon yihiin iyo haddii daryeelka ama adeegga la daboolayo.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington ma bixiyo dhiirigelin maaliyadeed si loogu dhiirrigeliyo kuwa go'aaminta Maareynta Ka-faa'iideysiga ah inay gaaraan go'aanno ku keenaya adeegsiga adeegsiga hoostiisa.
Si aad wax badan uga ogaato habka go'aan qaadashada ama haddii tiknoolajiyad cusub oo gaar ah ay daboolayso Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, fadlan wac kooxdayada Adeegga Macaamiisha 1-800-942-0247 (TTY Relay: Dial 711), Isniinta illaa Jimcaha, 8: 00 subaxnimo ilaa 8:00 pm
Xuquuqda Khilaafka Rafcaanka iyo Bixinta
Bixiye qandaraasle: Iyadoo la raacayo tilmaamaha Daryeelka Maaraynta ee Medicare, bixiyeyaasha qandaraaska haysta ma lahan xuquuq rafcaan. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu leeyahay hanaan dib-u-eegis ah si wax looga qabto arrimaha sheegashada bixiyeyaasha qandaraaska haysta. Codsiyada dib u eegista dalab bixiyaha qandaraaska haysta waa in lagu helaa CHPW 120 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda Talo Bixinta Xawaaraha (PRA). Nuqul ka mid ah PRA iyo dukumentiyo taageeraya (sida, diiwaanada caafimaadka) waa in lagu soo gudbiyaa codsiga.
Bixiye aan qandaraasle aheyn: Iyadoo la raacayo tilmaamaha Daryeelka Maaraynta ee Medicare, bixiyeyaasha aan qandaraaska haysan waxay leeyihiin xuquuq rafcaan. Xuquuqda rafcaanka ayaa lagu dabaqayaa sheegasho kasta oo CHPW ay diidday bixinta. Codsiyada rafcaanka lacag bixinta waa inay kujiraan qoraal dhameystiran oo saxiixan "Ka dhaafida Mas'uuliyadda" (WOL). CHPW ma bilaabi karto hawsha rafcaanka iyada oo aan la saxiixin WOL. Codsiyada rafcaanka ee aan ku jirin WOL waa la diidi doonaa. Codsiyada rafcaanka lacag bixinta waa in lagu xereeyaa 60 maalmood gudahood marka la helo PRA. Nuqul ka mid ah PRAdan iyo dukumintiyada taageeraya waa in lagu soo gudbiyaa codsiga racfaanka. CHPW waa inay go'aan ka gaarto racfaanka 60 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda la helay codsiga racfaanka.
Haddii CHPW ayiddo diidmada hore ee lacag-bixinta kadib dib-u-eegista racfaanka ama aysan go'aan ku gaarin 60 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda la helay codsiga racfaanka, CHPW waxay u gudbin doontaa codsiga racfaanka IRE si dib loogu eego. IRE waxay dib u eegi doontaa racfaanka waxayna ku wargalin doontaa adeeg bixiyaha qoraal ahaan go'aanka. Haddii CHPW ayiddo diidmada sheegashada asalka ah, bixiyeyaasha aan qandaraaska haysan waxay xaq u leeyihiin inay weydiistaan ​​CMS qandaraaska qaatay IRE inay dib u eegaan racfaanka.
Tilmaamaha Bixinta ee Bixinta Bixinta Shabakadaha
Ka Dhaafitaanka Bayaanka Mas'uuliyadda
Xuquuqda Muran Bixinta
Bixiyeyaasha qandaraaslaha: Tixraac Rafcaan Bixiye Qandaraasle ah
Bixiyeyaasha aan qandaraaska haysan: Iyadoo la raacayo tilmaamaha Daryeelka Maaraynta ee Medicare, bixiyeyaasha aan qandaraaska haysan waxay leeyihiin xuquuqda khilaafaadka lacag bixinta. Xuquuqda khilaafka lacag bixinta ayaa lagu dabaqayaa sheegasho kasta oo bixiyaha uu ku doodayo lacagta lagu bixiyay adeegga la daboolay inay ka yar tahay lacagta ay bixin lahayd Medicare-ka Asalka ah. Xuquuqda khilaafaadka lacag bixinta ayaa lagu dabaqayaa sheegasho kasta oo jirta waxaa jira khilaaf u dhexeeya adeeg bixiyaha aan qandaraaska haysan iyo CHPW ee ku saabsan go'aanka lagu bixinayo adeeg ka duwan kan adeegga biilasha. Codsiyada khilaafaadka lacag bixinta waa in lagu xareeyaa 120 maalmood gudahood ee PRA. CHPW waa inay go'aan ka gaarto khilaafka lacag bixinta 30 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda la helay khilaafka lacagta.
Khilaafaadka lacag bixinta waxay kuxirantahay dib u eegida CMS maadaama CHPW looga baahan yahay inay siiso bixiyeyaasha aan qandaraaska haysan isla qaddarka bixiyaha heli lahaa haddii bixiyaha biil Medicare asal ah. Nidaamka khilaafaadka bixinta qandaraas bixiyaha aan qandaraaska haysan looma adeegsan karo inuu ka horyimaado diidmada lacag bixinta ee keenta eber bixinta. Diidmada lacag-bixinta waa laga racfaan qaadan karaa sida lagu sharaxay qeybta Rafcaanka Bixiyaha Aan Qandaraaska Laheyn ee kore.
Su'aasha ku saabsan rafcaanka bixiyaha aan qandaraaska haysan ama nidaamka khilaafaadka lacag bixinta waxaa lagu hagaajin karaa waaxda Adeegga Macaamiisha ee bilaashka ah 1-800-942-0247 (TTY 711), 7 maalmood usbuucii, laga bilaabo 8:00 am ilaa 8:00 pm
Fadlan u gudbi Dib-u-eegidaada ama Mushaharka Lacag-bixinta:
Attn: Racfaanada iyo Cabashooyinka Faa'iidada Medicare ee CHPW
Dhammaan bixiyeyaashayada waa inay u hoggaansamaan xeerarka gobolka iyo federaalka. Liisaska buuxa ee siyaasadaha iyo si aad u hesho ilo dheeraad ah oo ku saabsan Khayaanada, Qashinka, iyo Xadgudubka, iyo Shaacinta Lahaanshaha iyo Xakamaynta, fadlan tixraac Bogga Barnaamijka U hoggaansanaanta.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington wuxuu sameeyaa siyaasado iyo nidaamyo gaar ah oo ay heli karaan bixiyeyaasha. Haddii aad u baahan tahay nuqullo adag oo ka mid ah agabkeenna, la xiriir Wakiilka Xiriirka Bixiyaha. Siyaasadaha hadda jira ee aad u baahan tahay inaad daryeesho xubnaha waxaad ka heli kartaa hoos.
Eeg dhammaan siyaasadaha iyo nidaamyada
Tilmaamaha Hore & Amarada Dhakhtarka ee Daryeelka Nolol Waara (POLST) Siyaasadda (CM118)
Siyaasadda Oggolaanshaha iyo Shahaadaynta (UM203)
Siyaasadda Kordhinta Xaddidaadda Macaashka (UM428)
Go'aaminta Caymiska iyo Siyaasadda Ka-Reebitaanka (PM554)
Siyaasadda Buuxinta Degdegga ah (PM516)
Siyaasadda Barnaamijka Qashinka iyo Xadgudubka (PM557)
Daryeelka Hospice, Daryeelka Caafimaadka Carruurta ee isku midka ah, iyo Siyaasadda Daryeelka Xanuunada Caafimaadka Carruurta (MM163)
Maareynta Bukaanka ee Isbitaalka (UM211)
Siyaasadda Daawada la isku duro (PM566)
Siyaasadda Barnaamijka Ka-badbadin la'aanta ee 'Opioid' (PM564)
Barnaamijka Maareynta Daaweynta Daaweynta (MTMP) Siyaasadda (PM556)
Siyaasadda Badbaadada Bukaanka ee Dawooyinka (PM509)
Helitaanka Farmashiyaha Inta Lagu Jiro Musiibo Federaal ah ama Siyaasadda Baaq Degdeg ah ee Caafimaadka Dadweynaha ah (PM514)
Hawlgalinta Sheegashada Daawada ee Qaybta D (PM558)
Dib-u-eegista Farmashiyaha ee Dib-u-go'aaminta Caymiska (PM555)
Siyaasadda Qiimeeynta (Default, Warbixinta, iyo Xeerarka aan Daboolin) (OP647)
Warbixinta Shuruudaha looga baahan yahay Medicare Qaybta D (PM561)
Siyaasadda Nidaamka Kala-guurka - MA (PM553)
Tababbarka loo baahan yahay
Bixiyeyaasha waxaa looga baahan yahay inay ku dhammaystiraan tababar Khiyaano, Qashin, iyo Xadgudub 90 maalmood gudahood ah markay qandaraas la galaan CHPW iyo sanadkiiba intaas ka dib. Dhammaan shaqaalaha rugta caafimaadka - oo ay ku jiraan agaasimayaasha guud, hoggaamiyeyaasha sare, maareeyayaasha, shaqaalaha wadaadka / maamulka, dhakhaatiirta, iyo shaqaalaha kale ee kiliinikada - ayaa looga baahan yahay inay helaan tababarkan. Koorsooyinka tababarka waxaa laga heli karaa Websaytka Shabakadda Barashada Caafimaadka ee CMS.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa bartayada Buugga Takhasuska.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 22, 2021